अर्डिक स्कूलले भव्य मनायो वार्षिक उत्सव – KhabarPurwanchal
अर्डिक स्कूलले भव्य मनायो वार्षिक उत्सव
खबर पूर्वाञ्चल, १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १९:२०
विराटनगर / विराटनगर– १० मा रहेको अर्किड बोर्डिङ स्कूलले भव्य कार्यक्रम आयोजना गरि वार्षिक उत्सव मनाएको छ ।
स्कूल परिसरमा आज भव्य समारोहको बिच स्कूलले वार्षिक उत्सव मनाएको हो ।
वार्षिक उत्सवमा विद्यार्थीहरूले साँस्कृति झल्किने नृत्य प्रस्तुत गरि सहभागि भएका अभिभावक, अतिथिहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गरे । यस्तै विद्यार्थीहरूले नृत्य, कविता र फेशन शो प्रस्तुतीले थप आकर्षण बढायो । वार्षिक उत्सवमा विद्यार्थीहरूले ‘प्रोजेक्ट वार्क’ पनि प्रर्दशनीमा राखेका थिए । विद्यार्थीहरूले चित्रकला प्रर्दशनीमा राखे ।
अर्डिक स्कूलमा अध्ययरत विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्कूलको चित्र बनाएर प्रर्दशनीमा राखेका थिए । उक्त चित्रमा विद्यार्थीको आकर्षण अभिभावकहरूको बढेको थियो ।
सोही अवसरमा प्राजेक्ट वार्कमा प्रथम हुने विद्यार्थीहरूलाई नगद तीन हजार रुपैयाँले पुरस्कृत गरियो । द्धितीय, तृतीयहुनेलाई क्रमश २ हजार १ हजार रुपैयाँ थियो । सान्तवना हुने पाँच जना विद्यार्थीलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिएको स्कूलका प्रिन्सिपल सि.एम. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै उत्कृष्ट र नियमित स्कुल आउने विद्यार्थीलाई पनि पुरस्कृत गरियो । कार्यक्रममा बोल्दै विराटनगर १० का वडाअध्यक्ष माधवराज वाग्लेले शिप र संस्कारसहितको गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यक भएकोले यसतर्फ स्कूल अगाडी बढनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्कूलका प्रिन्सिपल सिम.एम. श्रेष्ठलले विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखेको बताए । उनले निरन्तर रुपमा विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरि स्कूल अगाडी बढने बताए । गुणस्तरीय शिक्षासँगै विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्क्त क्रियाकलापहरुमा पनि प्राथामिकतामा राखेर अगाडी बढेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा स्कूलका अध्यक्ष अमित ढकाल, अर्किड कलेजका प्रमुख दिपेस बास्तोला, संस्थापक निर्देशक सिम रिजाल, मनिष भट्टराई, सुजित साह, राकेश साह, ओमप्रसाद यादव, उमेश कार्की, तुलसी गिरीको उपस्थिती रहेको थियो ।